Job 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Job ka na-asa ihe a gwara ya (1-22)
‘Gịnị mere Chineke ji esesa m okwu?’ (2)
Chineke adịghị ka Job, bụ́ mmadụ efu (4-12)
‘Ka m kurutụ ume’ (20)
10 “Ndụ m agwụla m ike.+ M ga-ekwupụta ihe na-enye m nsogbu n’obi. M ga-ekwu okwu n’ihi otú ahụhụ m na-ata si ewute m. 2 M ga-asị Chineke, ‘Ekwula na ikpe mara m. Gwa m ihe mere i ji na-esesa m okwu. 3 Ọ̀ baara gị uru na ị na-emesi m ike,Na ị kpọrọ ọrụ aka gị asị,+Ma na-anabata ndụmọdụ ndị ajọ omume? 4 Ọ̀ bụ anya mmadụ ka i nwere,Ka ị̀ na-ahụ ihe otú mmadụ efu si ahụ? 5 Ụbọchị ole ị na-adị ndụ ọ̀ bụ ụbọchị ole mmadụ efu na-adị ndụ,Ka afọ ole ị na-adị ndụ ọ̀ bụ afọ ole mmadụ na-adị ndụ,+ 6 Nke mere ị ga-eji na-enyopụta ihe ọjọọ m mereMa na-achọgharị ka ị hụ mmehie m?+ 7 Ị ma na aka m dị ọcha.+ E nweghịkwa onye nwere ike ịnapụta m n’aka gị.+ 8 Ọ bụ aka gị ka i ji kpụọ m ma kee m.+ Ma ugbu a, ị na-achọ ibibi m kpamkpam. 9 Biko, cheta na ọ bụ ájá ka i ji kpụọ m.+ Ma ugbu a, ị na-eme ka m laghachi n’ájá.+ 10 Ọ̀ bụ na i tinyeghị m n’afọ nne m,Ma kpụọ m n’ebe ahụ?* 11 I yiwere m anụ ahụ́ na akpụkpọ ahụ́ ka uwe,Jirikwa ọkpụkpụ na akwara jikọta m.+ 12 I nyela m ndụ, gosikwa m na ị hụrụ m n’anya. Nlekọta ị na-elekọta m echebela ndụ* m.+ 13 Ma i bu n’obi ime m ihe ndị a na nzuzo. Ama m na ọ bụ gị na-eme ihe ndị a. 14 Ọ bụrụ na mụ emee mmehie, ị ga na-ele m anya,+Ị gaghịkwa ahapụ ịta m ahụhụ mmehie m. 15 Ọ bụrụ na ikpe mara m, nke m agwụla. Ọ bụrụgodị na aka m dị ọcha, m ga-ekpudo ihu n’ala,+N’ihi na ihere emegbuola m, ahụhụ zukwara m ahụ́.+ 16 Ọ bụrụ na m welite isi m elu, ị na-achụgharị m otú ọdụm si achụ nta anụ,+Ị na-ejikwa ike gị emekpa m ahụ́. 17 Ị na-akpọta ndị ọhụrụ ga-agbagide m akaebe. Ị na-ewesakwu m iwe,Ihe ana-esikwuru m ike. 18 Gịnịzi mere i ji si n’akpa nwa nne m kupụta m?+ Ọ gaara akara m mma na m nwụrụ tupu onye ọ bụla ahụ m anya. 19 Ọ gaara adị ka e nweghị mgbe m dịtụrụla ndụ. A gaara esi n’akpa nwa kuru m kuba n’ili.’ 20 Ọ̀ bụ na ụbọchị ndụ m adịghị ole na ole?+ Ya hapụ m aka. Ya wepụ anya ya n’ebe m nọ, ka m kurutụ ume*+ 21 Tupu mụ agawa n’ebe ọ ga-abụ m gaa, agaghịzi m alọta,+N’ala kacha gbaa ọchịchịrị,+ 22 N’ala gbara itiri,N’ala oké ọchịchịrị na ọgba aghara,N’ebe ìhè ya dị ka itiri.”
^ Na Hibru, “Ọ̀ bụ na ị wụpụghị m ka mmiri ara ehi, meekwa ka m kpụkọta ọnụ ka chiiz?”
^ Ma ọ bụ “m gbasapụtụ ihu.”